कस्तो होला बाँकेमा स्थानीय सरकार ?
गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको आयोगले स्थानीय तहका संरचनाका बारेमा प्रारम्भिक आधारहरु सार्वजनिक गरेको छ । देशभर अधिकतम् ५६५ स्थानीय तह रहने प्रस्ताव गरेको छ । बाँकेमा स्थानीय तहका संरचना वढिमा ६ रहने बताइएको छ ।
आयोगले तराईका जिल्लाहरुमा गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम ५० हजार, नगरपालिकाका लागि ७५ हजार र जिल्ला सदरमुकामका लागि ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका आधारहरु बाहिर सार्वजनिक भएका छैनन ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार बाँकेमा ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३ जनसंख्या रहेको छ । हाल बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नपा र ३३ गाविसहरु रहेका छन् ।
बाँकेमा ३ नगरपालिका नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरा क्षेत्र तथा राप्ती किनारका गाविस र पुर्व पश्चिम राजमार्ग संग जोडिएका बाँके निकुञ्ज आसपासका गाविसहरु समेटेर २ वटा गाउँपालिका बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
बाँकेको क्षेत्रफल २३४७ वर्ग किमी छ । र यसको औषत लम्वाई र चौडाई क्रमशः ८४ र ४० किमी छ । हाल नेपालगञ्ज उपमनपा (२०७१ मंसिर १६ मा आसपासका ११ गाविसहरु समेटेर बनाइएको) को जनसंख्या १ लाख ४६ हजार रहेको छ । (स्मरण रहोस् नेपालगञ्ज नगरपालिकामात्र रहँदा जनसंख्या केवल ७२ हजार ५ सय मात्र थियो) । यसैगरी कोहलपुर नपामा ६२ हजार १ सय जनसंख्या छ । ठूला गाविस अर्थात १० हजार देखि २० हजार सम्म जनसंख्या रहेका नौवस्ता, वनकटवा, बागेश्वरी, बैजापुर, फत्तैपुर र उढरापुर रहेका छन् । भने ५ हजार सम्म जनसंख्या रहेका गाविस कालाफाँटा र राधापुर रहेका छन् । राधापुर (३५५५ जनसंख्या) बाँके कै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको गाविस हो ।
बाँकेको आर्थिक सम्भाव्यता र भौगोलिकता, जातीय संरचना, भाषाका आधारमा उल्लेखित गाविस र नपाहरुको पुनसंरचना गर्दै स्थानीय तह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यस आधारमा बाँकेमा ३ नगरपालिका र २ गाउँपालिका उपयुक्त हुने छ ।
बाँकेमा नेपाली, अवधि, उर्दु, थारु र मगर भाषीहरुको बाहुल्यता रहेको छ । यसैगरी जातीगत रुपमा मुस्लिम(१८.९९), थारु(१५.६५),क्षेत्री(१४.७६),पहाडे बाहुन(६.६५), मगर(५.७०), कामी(४.७२), यादव(४.७१), ठकुरी(३.६५), कुर्मी(२.२३), राम हरिजन चमार(१.८८) रहेका छन् ।
बाँकेको पुर्वी क्षेत्र राप्ती नदीको आसपास भारतीय सीमाक्षेत्रमा अवधि र उर्दु भाषि मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । नेपालगञ्ज उपमनपा र यस आसपासका गाविस साइ गाउ र बेलभारमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेता मिश्रित रहेको छ । फत्तेपुर, वैजापुर, महादेवपुरी र कचनापुर क्षेत्र थारु भाषिको वाहुल्यता रहेका गाविस हो । यहाँका अधिकांश नेपाली भाषी बासिन्दाहरु राप्ती अञ्चलबाट वसाइसराई गरेर आएका हुन् । कोहलपुर, नौवस्ता र वनकटवा पनि थारु जाती कै वाहुल्य रहेका भुभागहरु हुन् ।
बाँकेको पश्चिम क्षेत्रमा मिश्रित बाहुल्य रहेको छ । बागेश्वरी, राधापुर र सितापुर, खजुराखुर्द गाविसहरुमा पहाडे जनजाती र क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता रहेको छ भने रनियापुरमा मुस्लिम समुदायको वसोबास रहेको छ । उढारापुर र सोनपुरमा मुस्लिम समुदाय बढि संख्यामा रहेका छन् । गनापुर र बेलहरी गाविसहरु साना गाविस हुन् । यहाँ मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ ।
बाँकेको पुर्वको तुलनामा पश्चिम क्षेत्र अझ कोहलपुर नेपालगञ्ज सडक खण्ड र नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड आसपासका गाविसहरु नगरोन्मुख रहेका छन् । यस अर्थमा खजुरा क्षेत्र नगरपालिका हुनका लागि योग्य रहेको छ ।
तराइका जिल्लाहरुमा नगरपालिका हुनका लागि ७५ हजार जनसंख्या पुरयाउनै पर्ने अवस्थाले अहिलेको कोहलपुर नपा समेत ठूलो बनाउनु पर्दछ ।
राप्ती किनारमा रहेका गाविसहरु कम्दी, होलिया, हिरमनिया, बेतहनी, बनकटि, गंगापुर, मटेहिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर, कालाफाँटा र कटकुईया गाविसहरुको मिलाएर एक गाउँपालिका बन्दछ । यो गाउपालिकाको जनसंख्या ७३ हजार ८ सय छ । भविष्यमा यो नगरपालिका बन्ने आधार रहने छ । यि गाउपालिकामा मधेशी समुदायको बाहुल्यता छ । अवधि तथा उर्दु भाषा मातृभाषा हुने जनसंख्या करिब ८८.१५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी महादेवपुरी, कचनापुर, बैजापुर, फत्तेपुर, विनौना र खासकुश्माहरुको एक गाउँपालिका बन्न सक्दछ । यो जैविक विविधताले भरिपुर्ण तथा पर्यापर्यटनका लागि उपयुक्त हुने छ । यो गाउँपालिकामा थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । मातृभाषाका रुपमा थारु भाषा बोल्ने जनसंख्या ४८.३१ प्रतिशत रहेको यो गाउँपालिकाको जनसंख्या ५९ हजार ९ सय छ ।
नेपालगञ्ज (उपमहा) नगरपालिकामा साइगाउ र वेलभार गाविसलाई मर्ज गरेर नगरपालिका बनाउन सकिन्छ । प्रस्तावित नगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख ५८ हजार रहेको छ । यो बाँकेको सदरमुकाम हो । यहाँ मुलत भाषाका आधारमा अवधि (३४.३६), उर्दु (२५.७९) र नेपाली भाषी(३१.३५) प्रतिशत रहेका छन् ।
कोहलपुर नपाको अहिलेको जनसंख्या ६२ हजार १ सय रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ नपाको लागी आवश्यक ७५ हजार समेत नपुग्ने अवस्था रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर र वसाई सराईको वृद्धिदर समेत अत्याधिक रहेको यस क्षेत्रलाई भविष्यमा उपमहानगरपालिका बनाउने गरी पुनसंरचना गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि वृहत्तर कोहलपुर भित्र शम्सेरगञ्ज, चिसापानी, नौवस्ता, वनकटवालाई पनि समेटिनु आवश्यक छ । यसरी बनाईने नयाँ नगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख १५ हजार हुने छ । यो नगरपालिकामा नेपाली र थारु भाषीहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
खजुरा क्षेत्र भित्र रहेका राधापुर, सितापुर, बागेश्वरी, उढारापुर, सोनपुर,रनियापुर, टिटिहिरीया, खजुराखुर्द, वेलहरी र गनापुर लाई समेटेर नयाँ नगरपालिका बन्दछ । यो नपाको जनसंख्या ७७ हजार ३ सय हुने छ । र यहाँ करिब ४४ प्रतिशत नेपाली भाषी र अवधि र उर्दु भाषीहरु करिब २२.६५ र २१.६८ प्रतिशत रहेका छन् । टिटिहिरिया गाविस(९२३५) कोहलपुर नपामा नै पर्यो भने खजुरा क्षेत्र नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक जनसंख्या नपुग देखिन्छ ।
जनगणना २०६८ र बाँके जिल्लाको वस्तुगत विवरण २०७१
Posted by kiran Dhakal at 4:41 PM No comments:
व्लग भित्र खोजौं
Tweets by @kirankhajura
गाँउपालिका , नगरपालिका तथा विशेष , संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको आयोगले ...
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण कार्यविधि : गरौं हिसाब ।
शिक्षा नियमावली २०५९(संशोधन सहित)को नियम १९२ 'ङ' को प्रयोग गरि २०७२ फागुन २३ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्राल...
म सपनाको कुरा गर्दै छु । कार सपना । मैले देखेको सपना । सानैमा देखेको हो कार हुईक्याँउने सपना । त्यो पनि आफ्नो । पुरापुर व्यक्तिगत । परिवारस...
आमाको फोटो फेसवुकमा पोष्ट गनेु ढोंग हो ?
किन जोडिने सामाजिक सञ्जालमा ? My Mum ...... सामाजिक सञ्जाल अर्थात फेसवुक नै अहिले कतिपय नेपालीहरुका लागि ईण्टरनेट प्रयोग भएको छ । ने...
नेपालसंग झुण्डिएका १० रमाइला तथ्य
१०. कछुवा गतीमा इण्टरनेट सन् १९९४ बाट नै नेपालमा इण्टरनेटको शुरुवात भएको रैछ । तर लिविया पछि सबैभन्दा स्लो सबैभन्दा सुस्तगतीमा इण्टर...
ग्रेटर नेपालगंजको पक्षमा ( For Greater NEPALGUNJ) नेपालगंज मध्य तथा सुदुर पश्चिमको पुरानो शहर । व्यापारिक थलो । औद्योगिक नगरी । देशको न...
Photo of nepalgunj
Nepalgunj, Sadar line, the Main Bazzar area of Nepalgunj......
ओ जाम्वेजी.............. मुजुंगो (विदेशी) कलिंग
Zambezi in Lukulu जाम्वेजी । अफ्रिकाको चौथो ठूलो नदी । २५७४ किमि लामो नदी । जाम्वियाको नाम नै यसै नदीको नाममा राखिएको छ । कंगोबाट श...
कृष्णसार एफएम नेपालगंज
रुवरु एफ एम नेपालगंज
By Mero Nepalgunj. Picture Window theme. Powered by Blogger.